FIFARANANA, TAMIN’NY FOMBA OFISIALY, NY FAMINDRÀNA AN'IREO MPONINA TALOHA TAO AMIN’NY FASCÈNE GARE NANKANY AMIN'NY TANÀNA VAOVAO "PONT VALIHA" - Ravinala Airports
Araka ny fifanarahana voasonia, sy noho ny antony ara-piarovana an’ireo mponina tao amin’ny tanànan’ny Fascène Gare, dia, notendren’ny Fanjakana malagasy hamindra toerana azy ireo ny orinasa Ravinala Airports.
Nofaranan’ny orinasa Ravinala Airports tamin’ny fomba ofisialy ny famindràna an’ireo mponina taloha tao Fascène Gare, nankany amin’ny tanàna vaovao « Pont Valiha » tamin’ny alalan’ny fizarana ny kara-tany ny mponina manambara fa tompontany ara-dalàna, ny zoma 26 febroary 2021.
Nanampy tamin’ny fanatontosana an’io tetikasa io ny fiaraha-niasa akaiky tamin’ny komitin’ny famindra-monina, ahitana an’ny Minisiteran’ny Fitaterana, ny Fizahan-tany ary ny Famantarana ny toetrandro, ny Minisiteran’ny Fanajariana ny tany, ny Toeram-ponenana ary ny Asa vaventy, ny Prefektoran’i Nosy Be, ny Kaominina, ny Mpikirakira ny Fananan-tany, ny sampana topographique, ny sampana miandraikitra ny asa vaventy, ny fambolena, ny fitatanam-bolam-panjakana, ny Tahirim-bolam-panjakana, ny sefo fokontany Fascène Gare ary ireo solotenan’ny mponina voakasiky ny tetikasa.
Tokantrano miisa 65 no voakasiky ny tetikasa ary nafindra tamin’ny tany voajary 2 Ha ao Pont Valiha, nanomboka ny desambra 2019 izy ireo. Io tany io dia azon’ny Fanjakana ny 07 jona 2018.
Nisy ireo asa nataon’ny Ravinala Airports nahafahana nanajary an’ilay tanàna vaovao, toa ny fanamboarana làlana, toerana fiondranan’ny rano, toeram-pidiovana, fanasan-damba sy kabone iraisana, toerana fiandrasana taksibe, fampidirana jiro niaraka tamin’ny JIRAMA, ny fitantanana an’ireo fako ao an-toerana ary ny fametrahana fotodrafitrasa ho an’ny rano fisotro madio tamin’ny alalan’ny lava-drano, ny fisintoman-drano tamin’ny alalan’ny pompy ary fotodrafitrasa ahafahana misitraka ireo loharana roa avy amin’ny tendrombohitra.
Nanao asa fanampiny, ivelan’ny fifanarahany tamin’ny fanjakana, ihany koa Ravinala Airports, hanampiana an’ireo mponina. Noho ny vanim-potoanan’ny rivodoza misy eto Madagasikara, dia nomen’ny CPGU fiofanana manodidina ny fananganana trano mahazaka rivo-doza izy ireo. Nisy ihany koa fanampiana tamin’ny fitaterana an’ireo fitaovana fanamboaran-trano sy Fanomezana azy ireo olona mahay manorina trano.
Nanome fanampiana ara-tsakafo, an’ireo mponina, izay ilainay amin’ny fiainany andavanandro ny Ravinala Airports. Mizara ny fanampiana andiany faha 35 ankehitriny ny orinasa. Ary farany, ny tetikasa famerenana ny foto-pivelomana dia nahafahana nanampy an’ireo mponina tamin’ny alalan’ny Fanomezana asa azy ireo.
Nozaraina roa ny dingana tamin’ny fanatontosana ity tetikasa famindrana mponina ity. Ny voalohany dia teo anelanelan’ny taona 2016 ka hatramin’ny 2019 tao amin’ny Pont Valiha. Natao nanaraka antanatohatra 7 izany : ny famantarana ara-pomba ofisialy an’ireo olona voakasiky ny tetikasa miampy fanadihadiana tamin’ny fanonerana tokony nomena azy ireo, ny fividianana tany vaovao, ny fanaovan-tsonia ny faneken’ireo mponina ny tetikasa, ny famantarana sy fandoavana an’ireo honitra, ny fikarakarana ny tany sy fananganana trano, ny fifindran-toerana ary ny fandraisana an’ireo kara-tany tsirairay.
Efa tanteraka avokoa ireo antanatohatra 7 tamin’ny famindran-toerana ireo mponina, araky ny fenitry takian’ny SFI sy ny lalàna misy eto Madagasikara.
Ny fanatanterahana an’izao tetikasa izao dia nampiasana vola mihaotran’ny 2.700.000.000 Ar